Ifekthri yamafulegi wokuphromotha | I-China Abenzi Bamafulegi Wokuphromotha nabahlinzeki
I-CFM-B2F (ibhizinisi liya efektri) nesikhathi sokuhola esingu-24-Hour
Ama-oda wami Ngena ngemvume Bhalisa
Isitolo sethu esiku-inthanethi sitholakalela i-:
Imikhiqizo Yokubonisa Umcimbi
Amakhava Wethebula Afakiwe
Amathebula wethebula elijwayelekile
Nweba Ithebula Amakhava
EZ Tube Ugaxekile Khombisa
I-EZ Tube Banner Stand
Indwangu Ugaxekile Ekhombisa
Isinyathelo bese uphinda okwasemuva
Ukungezwani Indwangu Khombisa
Eminye Imibukiso Yezokuhweba
Amafulegi wePole ngokwezifiso
Isibhengezo esinamacala amabili
Ifulegi lokuphrinta emaceleni amabili
Izindwangu & Izimfashini
Umkhono Wengalo Ephrintiwe Ngokwezifiso
Ama-Bandana Aphrintiwe Ngokwezifiso
Izicathulo Zekhanda Eziphrintiwe Ngokwezifiso
Amasaka Aphrintiwe Ngokwezifiso
Nweba Ithebula Amakhava nge-O ...
Indwangu Banner Stand- Premium
10 × 10 Full Umbala Isikhangiso ...
Amafulegi Wophaphe Wethebula
Njengenguqulo encane yeFlag Yethu Yokubonisa, ifulegi lokubonisa itafula kuyisinqumo esihle kuwe uma ufuna ukuhlobisa isiza sakho ngaphandle kokuhlangana esimweni esisemthethweni noma esingahlelekile ngesisindo saso esincane, ukuma okuncane nokuhlukile. Imidwebo iyatholakala ngokunyathelisa okusemaceleni noma okukabili. I-Hardware ingasetshenziswa kaninginingi.
Shiya okujulile ezithamelini ngamafulegi wesikhulumi. Yenziwe nge-satin ye-polyester ekhangayo nokho eqinile futhi itholakala ngosayizi abaningi, ngaphandle kwalokho, iyaphatheka futhi kulula ukuyisebenzisa. Futhi kuyamangalisa ukusetshenziswa unomphela njengamabhanela e-lectern emasontweni nasezindaweni zemfundo.
Amafulegi enkundla yegalofu asetshenziselwa izifundo zegalofu emhlabeni wonke. Amafulegi enkundla yegalofu adlala indima ebalulekile ekusizeni umdlali ukuthi athole imbobo. Ziyabonakala ngemibala egqamile ezinkundleni zegalufu.
Uma ucabanga ukuletha umlayezo wakho ngendlela ecacile engadini yakho, otshanini noma kwezinye izindawo ezingaphandle, khona-ke kuzodingeka ube nefulegi lengadi. Ungenza ngendlela oyifisayo zonke izici zefulegi lakho, kusukela kumumo, umbala, isitayela, ilogo kuya kokuqukethwe noma ngisho nasekuqedeni. Ifulegi lengadi elenziwe ngokwezifiso nelogo yakho kulo lisho okungaphezulu kakhulu kokuhlobisa, kepha lisebenza njengophawu, noma uphawu oluthumela imiyalezo yakho kubantu abadlulayo.
Ifulegi lemoto liyindlela emfashini yokubonisa ama-logo nemikhiqizo yakho. Akunandaba ukuthi ushayela imoto noma uvele ume endaweni yokupaka izimoto, kufakwe ifulegi lemoto lokuphromotha emotweni yakho, ungaliqonda ilukuluku labantu nokunaka kwakho ngaso leso sikhathi. Ngakho-ke, noma nini lapho unombukiso wemoto noma umkhankaso wokuphromotha, akungabazeki ukuthi amafulegi ezimoto ayindlela engcono kakhulu.
Amafulegi obhaka ayithuluzi elihle lokuqhakambisa ibhizinisi. Ilungele ukugqugquzela imicimbi nemikhankaso, idokodo lakho embukisweni noma ukugcina iqembu lakho lokuvakasha lihlangene.
Ifulegi eliphrintiwe litholakala ngezinhlobo ezimbili, izitayela ezine- i-Concave, i-Teardrop, i-Rectangle ne-U.
Thola amanani anemininingwane